आज जेठ २७ गते सोमवार, हेर्नुहोस् आजको राशिफल !
जेठ २७, २०७६ GA
आज बिक्रम संवत २०७६ साल जेठ महिनाको २७ गते सोमवार तद अनुसार सन् २०१९ जुन १० तारिख , तपाईको दिन कसरी बित्ला हेर्नुहोस आजको राशिफल !
शारीरिक तथा मानसिक थकानको अनुभव हुनेछ। आत्यधिक मेहनतका बाबजुत कार्यमा सफलता कम मात्र प्राप्त हुनेछ। सन्तान सुख मिल्नेछैन। कार्यभार बढेर जानेछ । पेट सम्बन्धी समस्याको शिकार भइने छ। भोलीको दिन सकेसम्म यात्राका लागि नानिस्कादा नै राम्रो हुनेछ। सरकारी कार्यमा सफलता मिल्नेछ।
दृढ मनोबल र आत्मविश्वासका साथमा प्रत्येक कार्य सफलतापुर्वक सम्पन्न हुनेछ। अपेक्षा गरे अनुरुपको कार्यमा सफलता मिल्नेछ। शुभ समचार सुन्ने अवसर मिल्नेछ। सरकारी क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ। आर्थिक लाभ भएर जानेछ। बिद्यार्थी वर्गका लागि पढाई लेखाईको क्षेत्र अनुकुल रहेको छ।
नयाँ कार्यको थालनी गर्नका लागि भोलिको दिन शुभ रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र अनुकुल रहेको छ। छोटो दुरीको यात्रा हुने सम्भावना रहेको छ। सरकारी क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ। प्रतिष्पर्धात्मक कार्यमा विजय हासिल गर्ने अनुकुल समय रहेको छ। आर्थिक कारोवारका क्षेत्रमा खासै लाभ हुने देखिदैन।
सोचविचार र बिशेष सावधानीका साथमा कार्य गर्दा फाइदा पुग्ने देखिन्छ। शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताको शिकार भइने छ। आँखामा समस्या देखिन सक्छ सावधान रहनुहोला। परिवारमा मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुनेछ। बिद्यार्थीका लागि अपेक्षित परिणाम नमिल्दा मानसिक चिन्ताले सताउने छ। खर्चको मात्रामा वृद्धि भएर जानेछ।
पिताको तर्फबाट लाभ मिल्नेछ। आत्मविश्वासका साथमा अगाडी बढ्दा अपेक्षाकृत सफलता मिल्नेछ। सामाजिक रुपमा मान सम्मनमा वृद्धि भएर जानेछ। बोलीको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले बिशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा सावधानी रहनु पर्नेछ। समग्रमा सिंह राशी हुनेहरुका लागि भोलिको दिन मध्यम फलदायी रहेको छ।
शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताको शिकार भइने छ। अनावाश्य झैँ झमेलामा नाफस्दा नै राम्रो हुनेछ। धार्मिक एवम आध्यात्मिक कार्यको पछाडी धन खर्च भएर जानेछ। अनावश्यक खर्च हुनबाट बच्नु पर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा बिशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। व्यवहारमा उग्र भाव पैदा हुनेछ।
आय आर्जनमा वृद्धि भएर जानेछ। मित्र लाभ हुनेछ। अपेक्षा गरे अनुसार हरेक कार्यमा सफलता मिल्नेछ। मनोरन्जनात्मक कार्यको पछाडी दिन रोमन्चक बन्नेछ। उत्तम भोजनको अवसर मिल्नेछ। बैवाहिक जीवन सुमधुर रहेको छ। समग्रमा तुला राशी हुनेहरुका लागि भोलीको दिन शुभ फलदायी रहेको छ।
व्यापार व्यवसायको क्षेत्र अनुकुल रहेको छ। सोचेका हरेक कार्य सफलता पुर्वक सम्पन्न भएर जानेछ। मान सम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ। नोकरीमा पदोन्नतिको योग रहेको छ। पारिवारिक सुखानुभूति मिल्नेछ।
भोलीको दिन सकेसम्म यात्रा तय नगर्दा नै राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ। पारिवारिक चिन्ताले सताउने छ। भाग्यले साथ दिने छैन। कार्यमा कम सफलता प्राप्त हुनेछ। प्रतिस्पर्धीका बिचमा सामान्य खटपट हुन सक्ला। सहकर्मीको साथ र सहयोह सोचे अनुसार प्राप्त हुने छैन।
अचानक स्वास्थ्यमा आएको परिवर्तनका कारण धन खर्च हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। व्यवसायिक एवं सामाजिक कार्यका लागि बाहिरको यात्रा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। खानपानमा बिशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। क्रोध तथा नकारात्मक विचारप्रति संयम रहनु पर्नेछ। नोकरी व्यवसायको क्षेत्र अनुकुल रहेको छ। बिशेष गरि तपाईका लागि भोलीको दिन सामान्य रहेको छ।
दृढ मनोबल र आत्मविश्वासका साथमा कार्य गर्न सकिने छ। लामो तथा छोटो दुरीको यात्राको सम्भावना रहेको छ। नया बश्त्रभुषण खरिद गर्ने शुभ समय रहेको छ। सहकर्मीको प्रसस्त साथ र सहयोग प्राप्त भएर जानेछ। स्वादिष्ट भोजनको अवसर प्राप्त हुनेछ। वाहनसुख मिल्नेछ।
स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ। घरायसी वातावरणमा सुख शान्ति छाउने छ। अपेक्षा गरे अनुरुप कार्यमा सफलता मिल्नेछ। बाणी तथ् व्यवहारमा केहि संयमितता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। सहकर्मीको प्रसस्त साथ र सहयोग प्राप्त भएर जानेछ। शुभ समाचार सु न्ने अवसर मिल्नेछ।
प्रकाशित : सोमबार, जेठ २७, २०७६०१:५०
भोलि जेठ महिनाको अन्तिम मंगलबार, तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !